Maroantsetra: nentanina ho matihanina ireo mpanao asa tanana | NewsMada
Maroantsetra: nentanina ho matihanina ireo mpanao asa tanana
Ny 15 febroary lasa teo, nanentana ireo mpanao asa tanana any Maroantsetra hiditra ho matihanina, anaty rafitra ara-dalàna ny misahana ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana any amin’ny faritra Analanjirofo,. Nanentanana manokana azy ireo ny hananana karatra maha mpanao asa tanana. Fanamby lehibe izany ho an’ny faritra, satria hahazoan’ireo mpanao asa tanana tombontsa maro mahakasika ny lalam-pihariana ataony.
Mifanojo amin’ny fifanarahana miaraka amin’ny Instat (Ivontoeram-pirenena momba ny antontanisa) izany hahafantarana ny mombamomba azy ireo sy ny isany. Ny taona 2019, ny nomena fiofanana ireo mpanao asa tanana miisa 80 ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo, indrindra eo amin’ny fanodinana rofia sy ravinala.
Efa natao izao fiarahana amin’ny mpanao asa tanana izao, tany amin’ny distrika maro, toy ny tany Mahajanga, Manakara, Toliara, Morondava. Samy manana ny talentany sy mampiavaka azy avokoa ireo, ka homen-danja ho matihanina. Fepetra voalohany amin’izany ny fananana karatra.